mairie-antananarivo – AJESAIA- U16- Nahazo tso-drano sy vatsin-dalana avy amin’ny Ben’ny Tanàna – CUA
AJESAIA- U16- Nahazo tso-drano sy vatsin-dalana avy amin’ny Ben’ny Tanàna – CUA
administrateur 3 aogositra 2018 Commentaires fermés
Handray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin’ny baolina kitra antsoina hoe Gothia Cup China, hatao any Chine ny ekipan’ny AJESAIA- U16 ny 7 ka hatramin’ny 21 aogositra ho avy izao. Tonga nangataka tso-drano tamin’ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana izy ireo androany maraina, tetsy amin’ny Lapan’ny tanànan’Analekely.
Tamin’izany no nanomezan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana tso-drano ho azy ireo hahomby amin’izany fifaninanana iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra izany, izay handraisan’ny firenena 46 anjara, sy nanomezany vatsin-dalana ho azy ireo koa.
Hafatra napetraky ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana nandritra izao fihaonana tamin’ireto ekipan’ny AJESAIA- U16, na latsaky ny 16 taona ireto izao, ny hananana toe-tsaina ara-panatanjahantena na esprit sportif hatrany, izay somary very ihany izany tao ho ao. Sambany ny AJESAIA no handray anjara amin’ity lalao iraisam-pirenena Gothia Cup China, hatao any Chine ity, nanambara ny filohany Jasmina Ravelonarivo, fa hanandratra avo ny lazan’i Madagasikara izy ireo any Chine izao.